Indawo Yokuphumula Ezimele Yasebhishi Nezisebenzi - I-Airbnb
Indawo Yokuphumula Ezimele Yasebhishi Nezisebenzi
Treasure Beach, St. Elizabeth Parish, i-Jamaica
I-i-villa ephelele ibungazwe ngu-Mark
Ibekwe phakathi kohlaza olukhazimulayo lwe-Caribbean, iMinerva House izidla ngendawo engokwemvelo, ezolile ebheke ulwandle olunesihlabathi olucezile olunokubukwa kolwandle okumangalisayo. Ilungele labo abafuna ukuthula nokuthula endaweni eyimfihlo, esezingeni eliphezulu.
Isakhiwo esimangalisayo sesimanje siyala ukubukwa kolwandle okukhazimulayo kusukela ngesikhathi sokuqala ungena endlini. Uma usungaphakathi kunendawo yokuhlala ebabazekayo, ewumhume eheha umoya ohelezayo wasolwandle kodwa opholile ngenkathi ithatha izihlalo eziningi kanye nesigaba sokudlela esiseduze. Lokhu kuvulela uvulandi omude, ovulekile omboziwe - olungele ukudla kwe-alfresco noma nje ukuphumula ngesiphuzo, ukubuka izinyoni zasezindaweni ezishisayo nokushona kwelanga okumangalisayo.
Igumbi lokulala ngalinye noma amane apholile futhi anomoya anezindawo zawo zokugezela ze-en-suite, umoya opholile kanye nefenisha yophahla. Amakamelo amabili okulala nawo anamashawa amabili angaphandle anokubukwa kolwandle kanye nokufinyelela okuqondile kuvulandi.
Izinyathelo ziholela ezansi zisuka echibini lamanzi elimemayo ziye olwandle olukhangayo, olucezile olunesihlabathi esihle esisagolide, amanzi acwebile nezixhobo zawo zemvelo. Kukhona i-snorkelling eningi enhle futhi kungenzeka futhi uhlele izikebhe zohambo ukuze zikulande ogwini lolwandle. Kuyipharadesi labathandi bemvelo elinamahlengethwa, izinyoni ezingavamile ngisho nezimfudu ezifika zizobekela amaqanda esihlabathini.
U-Edwin no-Tamesha bazokwamukela ngokufudumele futhi banakekele zonke izidingo zakho - kusukela ekuphekeni ukudla okumnandi ozikhethele kona, (okuhlanganisa nobusuku obukhethekile buka-Edwins izoso) kuya ekunakekeleni ukunakekelwa kwendlu kanye nokuwasha izingubo, ingasaphathwa eyokukwenza le pina colada enhle kakhulu! Bobabili banolwazi kakhulu ngendawo futhi bazokwenza konke abangakwenza ukuze kube iholidi eliphelele.
I-Treasure Beach ingenye yezindawo eziphephe kakhulu nezinobungani kakhulu e-Jamaica enomuzwa wangempela womphakathi uma kuziwa kwezokuvakasha.
Le ndawo epholile ikude nesiphithiphithi sezindawo zokungcebeleka ezibandakanya konke zase-Montego bay - eyakhelwe amahhotela amancane nezindlu ezithengisa kakhulu kukhona insada yamabhishi anesihlabathi esihlanzekile, isiko lendawo kanye nokudla okuyiqiniso kwase-Jamaican.
Idlanzana lezindawo zokudlela kanye nezindawo zokudlela ezijwayelekile zonke zingaphakathi kohambo lwemizuzu eyi-10, okuhlanganisa i-Jack Sprats kanye nebha neretshurenti ye-Jake's Hotel edume kakhulu.
Kunedlanzana lezitolo ezincane ezithengisa izinto eziyisisekelo phakathi nokushayela imizuzu embalwa; Isitolo esikhulu kanye nemakethe yezithelo nemifino ephithizelayo yansuku zonke itholakala eBlack River - cishe imizuzu engama-30 ukuya khona.
I-Black River safari cruise (ithathwe ogwini) - jabulela izilwane zasendle zemvelo eduze komfula omude kunawo wonke wezwe okwazi ukuzulazula onezingwenya ezinkulu kanye nenala yezilwane zezinyoni -ma endaweni eyingqayizivele ye-Pelican Bar endleleni ukuze uthole isiphuzo esipholile.
Izimpophoma ezinhle ze-YS Waterfalls cishe zihamba ngehora elilodwa uma uhamba - bhukuda emachibini emvelo, ugibele e-swing noma undizele phezulu ngaphezu kwezimpophoma ngocingo lweziphu - kumnandi kakhulu.
Hlola ezinye izinketho ezise- Treasure Beach namaphethelo